Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neebheyili zerhasi yendalo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Kumakhaya amaninzi iibhoyila zisetyenziselwa ukufudumeza amanzi ukuze asetyenziswe kwiishawari okanye emakhitshini. Kubalulekile ukuba sazi ukuba zeziphi iibhoyili ezisebenza ngokukuko ukuba sifuna ukonga iindleko zombane kwaye sisebenzise uninzi lwezixhobo esinazo. Namhlanje siza kuthetha nge-boilers yegesi yendalo.
Kule posi ungafunda yonke into enxulumene nolu hlobo lwe-boiler. Ukusuka kwinto eziyiyo kunye nendlela esebenza ngayo kwezona zicetyiswa kakhulu ukuba uzisebenzise, ​​ukujonga izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga kuzo nganye. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngayo?
1 Yintoni iibhoyili zerhasi yendalo?
3 Iindidi zebhoyili zerhasi yendalo
3.1 Iibhoyila zegesi ezingangeni manzi
3.2 Iibheyile zegesi zeNOX ezisezantsi
3.3 Ukujijisa iibhoyile zerhasi
3.4 Iibheyili zomoya zomoya
5 Izinto eziluncedo zeboilers zegesi
Yintoni iibhoyili zerhasi yendalo?
Ibhoyila yendalo yendalo sisiqulatho esinamanzi ekufuneka efudunyezwe ioyile yegesi yendalo.
Sonke sifuna ukugcina uninzi epokothweni yethu kwimiba yasekhaya ukuze sikwazi ukuyichitha kuhambo, ii-whims okanye nantoni na esiyifunayo. Ukongeza, ngokusetyenziswa kwamandla sifaka ukuzibophelela kwimeko yemo engqongileyo. Ama-boiler, njengezinye izixhobo zasendlini, abaluleke kakhulu kubomi bethu, kuba ngawo sifudumeza amanzi esiwasebenzisayo.
Ukukhetha imodeli elungileyo okanye hayi kuxhomekeke ngokupheleleyo kulwazi olusebenzayo lokuba yeyiphi i-boiler efanelekileyo kakhulu kwimeko yethu. Kubalulekile ukuba wazi ukuba yeyiphi ibhoyila esiza kuyikhetha ngokuxhomekeke kuyo imodeli, ulondolozo oludingayo, uhlaziyo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo. Ukuba singakhetha eyona ilungele thina, singonga imali eninzi ukuphela kwenyanga. Ukongeza, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba, kokukhona ukusebenza kunye nomgangatho webhoyila kuphezulu, kokukhona siya kuwonakalisa ummandla ngongcoliseko olukhutshiweyo.
Iibhoyila zinesitshisi esinoxanduva lokuqalisa ukutsha kwegesi. Le gesi igesi yendalo, Nangona kukho ii-boilers ezibonelelwa ngamafutha yipropane okanye idizili. Xa irhasi ishushu, ijika amanzi aqulethwe kwitanki ibe ngumphunga kwaye ashiye iisekethe ukufudumeza lonke ikhaya. Lo mphunga wamanzi ungasetyenziselwa ukudibanisa iiradiyetha okanye nokuba ungaphantsi kobushushu.
Iipropu boilers zifuna enye itanki yokugcina igesi, ke sihlala kwindawo engaphezulu kunokuba singathanda ukunikezela kolu hlobo lwezixhobo. Ezi zedizili zitshiphu kwaye ikwasivumela ukuba sipheke. Ukongeza, ifuna indawo yokuphuma yeegesi eziveliswe ngexesha lokutsha, ngenxa yoko zifuna ukufakelwa okungaphezulu.
Zonke ezi mfuno zenza ukufakela ibhoyila ixesha elininzi kwaye ekugqibeleni kubize kakhulu. Ngesi sizathu, ii-boilers zegesi yendalo zezona zikhuselekileyo nezona ziluncedo. Ingcamango yerhasi yendalo ixhaphake kakhulu kwaye isetyenziswa ngokubanzi kangangokuba yaziwa njenge Isixeko segesi.
Iindidi zebhoyili zerhasi yendalo
Kukho iindidi ezahlukeneyo ze-boiler yegesi yendalo kwaye, njengoko bekutshiwo ngaphambili, kufuneka sazi kakuhle ukuba yeyiphi kwezi esinokukhetha ukuyisebenzisa kakuhle izixhobo zethu, emva kwayo yonke loo nto, ukugcina imali.
Iibhoyila zegesi ezingangeni manzi
Ezi boilers zinegumbi lokutsha elitywiniweyo kwaye sukusebenzisa umoya ngaphakathi ekhaya. Olu phawu lubenza bakhuseleke ngakumbi, kuba iigesi eziveliswa ngexesha lokutsha azidibani nomoya esiwuphefumlayo.
Iibheyile zegesi zeNOX ezisezantsi
I-nitrogen oxides zingcolisa iikhompawundi eziveliswa ngexesha lokutsha kunye neoksijini engaphezulu. Ii-boilers ezingenalo naluphi na uhlobo lokumiselwa kokungcola zingcolisa ngakumbi kwaye zingasebenzi kakuhle. Olu hlobo lwebhoyila luyilo olufana nolo lwangaphambili kodwa ilungiselelwe ukukhupha i-nitrogen oxides encinci.
Ukujijisa iibhoyile zerhasi
Bayayigcina imodeli njengegesi exineneyo, kodwa banethuba lokusebenzisa kwakhona amandla omphunga wamanzi amaxesha ngamaxesha. Oko kukuthi, banesekethe leyo iphinda ithumele umphunga wamanzi osetyenzisiweyo ukunceda ukufudumeza amanzi aseleyo etankini. Oku kunciphisa iindleko ezipheleleyo zamandla asetyenziselwa ukufudumeza amanzi, kuba ithatha ithuba lobushushu obushiyekileyo bomphunga ovelisiweyo.
Kukhuselekile kwaye kusebenza ngakumbi kwaye sinokugcina imali eninzi ekusebenziseni igesi yendalo.
Iibheyili zomoya zomoya
Kule modeli yebhoyila, ngokungafaniyo naleyo yangaphambili, igumbi lokutsha livulekile kwaye umoya usetyenziselwa ukufudumeza amanzi eqokelelwe kwindawo apho kukho ibhoyila. Ezi bheyili zingcolisa ngakumbi kwaye azisebenzi kakuhle kwaye zikhuselekile. Ukongeza, bahambisa iigesi eziyingozi emakhayeni ethu.
Ukuthetha ngamaxabiso ngokubanzi kunzima, kuba kukho amawaka eemodeli zohlobo ngalunye. Nangona kunjalo, ii-boiler zomoya (nangona zincinci zinconywayo) zincinci. Ixabiso layo lijikeleze i-euro ezingama-300. Umgangatho osezantsi, ixabiso eliphantsi. Kodwa ayisiyonto yalonto, kuya kufuneka sikhethe ezi. Siza kungcolisa ngakumbi kwaye sichithe igesi eninzi ekuhambeni kwexesha njengoko ukusebenza kwayo kusezantsi.
Kwelinye icala, iibhoyila ezingangeni manzi zinexabiso eliguqukayo phakathi kwama-400 ukuya kuma-1400 eeuros. Banexabiso lokuqala elibiza kakhulu, kodwa ukungangcolisi okungakumbi kunye nokusebenza ngokukuko, ekuhambeni kwexesha, kuya kuthetha ukusetyenziswa kancinci kwegesi kwaye, ke, iindleko ezingaphantsi.
Izinto eziluncedo zeboilers zegesi
Sebenzisa i-boiler yegesi kunezibonelelo zayo kwaye zezi zilandelayo:
Ixabiso laso lihlala libiza (ukusuka kwi-300 euros). Inokuba nayo ekhaya.
Iziphumo zalo ukufudumeza amanzi kuyakhawuleza kwaye kuyonwaba. Ukongeza, ngokuba ne-thermostat kunye nekhawuntari, inokucwangciselwa ukufudumeza iqondo lobushushu esilifunayo.
Abaqheleki ukuthatha indawo eninzi kwaye banayo ubomi beminyaka emininzi.
Ayifuni kucocwa xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokufudumeza kwaye ayikhuphi ingxolo.
Okokugqibela, kubalulekile ukubiza izinto ezingeloncedo ngolu hlobo lwe-boiler. Eyona nto ibonakala ingeloncedo kukugcina kwayo. Kufuneka zicocwe kube kanye ngonyaka ukunqanda ukonakala kunye nejam kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukuthintela iingozi.
Ngolu lwazi unokukhetha ukuba loluphi uhlobo lwe-boiler olulungele wena kwaye ulondoloze kangangoko xa kufudunyezwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neebheyili zerhasi yendalo
Ukwazi uMphathiswa Wezendalo kunye Nocwangciso Lendawo
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nezitovu zepelete